Ihe nzuzo nke na-eto eto mulberries, esi na-elekọta osisi - Mulberry na-eto eto - 2019
O doro anya na onye ọ bụla maara ihe mkpụrụ osisi tọrọ ụtọ mulberry na-enye, mana ọtụtụ ndị na-eche na ilekọta ya chọrọ nkà pụrụ iche. Anyị ga-akwụsị akụkọ ifo a, n'ihi na mulberry nwere ike inwe ọganihu nke ọma na mba anyị, ọ dịghịkwa ihe ọ bụla gbasara ya.
Olee otú akụ a mulberry?
Atụmatụ osisi na-elekọta
Ụkpụrụ na-eme ka ọ dị mma
Esi kwadebe mulberry maka oyi?
Olee mgbe na esi ewe ihe ubi?
Ọnọdụ dị mkpa nke na-eto eto mulberries
Ịghapụta mulberry ma na-elekọta ya dị nnọọ mfe nke na ndị mmadụ na-akpọ ya "osisi maka umengwụ." Onye obula nwere ike itolite ya na mpaghara nke aka ya, na n'emeghi otutu ihe maka nke a. Na gburugburu ebe obibi, ọ dị oke mma. Ọbụna mulberry, ịgha mkpụrụ na nlekọta nke na-eme n'etiti etiti, ga-emepụta obere ihe na-edozi kwa afọ.
Ị ma? Ndị bi n'ebe ọwụwa anyanwụ na-ewere osisi mulberry osisi dị nsọ. A na-edebe tebụl n'okpuru ya, ezinụlọ niile nọkwa na ya. Emekwara ndokwa n'okpuru tebụl mulberry. Udo osisi osisi Mulberry bụ omenala ndị inyom nke East.
Osisi muluku kwesiri ibia n'ebe di nma n'igwe, ebe ebe ugwu na odida anyanwu adigh. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ịnwere ike ịmechitere onwe gị megide ha.
Osisi ahụ na-eto ngwa ngwa, na-eguzogide mmiri ozuzo ma ghara ịta ahụhụ ọbụna site na nnukwu frosts. O nwere ike idi oyi na -30 ° C.
Ọ dị mkpa! N'oge a na - eto eto, a na - eweghachi ngwa ngwa a na - emegharị mkpụrụ osisi ahụ.
A na-akụ mulberry n'ime 90% nke ala. Ma, n'ezie, ọ ga-amị mkpụrụ dị mma naanị na ala ndị na-eme nri bụ ndị bara ọgaranya na ihe oriri. A na-amachibido iwu ịkụ osisi ndị a na mmiri mmiri na ala mmiri. Nhọrọ kachasị mma ga-abụ ala na ezigbo mmiri drainage na ikike dị elu ijigide mmiri. Mgbe ị na-akụ mkpụrụ osisi mulberry, buru n'uche na ha na-etolite n'oge na-aga, n'ihi ya, a ghaghị ịhapụ anya n'etiti seedlings ahụ ruo 6 m.
Ị ma? A na-akpọ Mulberry "eze nwanyị nke tomato", osisi ahụ na-adịkwa ndụ dị ka "osisi nke ndụ" ogologo oge. Dị ka nkwenkwe ndị ahụ si kwuo, a na-enye osisi mulberry ahụ ndị na-achụpụ mmụọ ọjọọ. Mulberry na-egosikwa ọrụ siri ike na nsọpụrụ nye ndị nne na nna.
Na-eto eto mulberries, dịka osisi ọ bụla ọzọ, na-amalite site na ịkụ ihe, nke kachasị mma na etiti oge opupu ihe ubi, ya bụ n'April, ruo mgbe mmiri ga-amalite. Nke abụọ bụ n'etiti etiti mgbụsị akwụkwọ tupu mmalite oge ezo.
Ọ dị mkpa! Ndị na-akọ ubi na ahụmahụ dị ukwuu na-atụ aro ịkụ osisi mulberries na ọdịda. N'ihi na osisi nke lanarị oge oyi n'oge nwata ga-adị ndụ ogologo oge.
Ịhọrọ ebe kwesịrị ekwesị maka ịkụ osisi, ọ dị mkpa iburu n'uche mmasị ya. Osisi mulberry, dị ka mulberry a na-akpọ, adịghị amasị mmiri oke mmiri, ya mere, ịgha mkpụrụ ma na-elekọta ya aghaghị ịmalite site na nkọwa nke ala kwesịrị ekwesị. Mpempe mmiri ala ekwesịghị ịfe otu mita na ọkara.
Ọ dị mkpa! Ụmụ osisi na-enweghị ike ịmị mkpụrụ. Ma ịchọpụta ala nke mkpụrụ gị ga-ekwe omume naanị mgbe afọ ise gasịrị. Iji zere ihe ndị dị otú ahụ, anyị na-akwado ịzụta seedlings ndị na-amị mkpụrụ ọ dịkarịa ala otu ugboro.
Osisi nwere ike ịkwadebe izu abụọ tupu ị kụọ osisi. Nha ya na-adabere na usoro mgbọrọgwụ seedling. A ghaghị itinye osisi n'ime olulu na njedebe na njedebe, kpamkpam. Ogologo nha nke olulu - ihe dika 50cm ³.
Ọ bụrụ na ala a na-akụ osisi ahụ adịghị mma na nri, ọ ga-eme ka olulu ahụ dịkwuo mbara ma dị omimi nke na a ga-etinye ihe dị ka kilogram 7 nke compost jikọtara na 100 grams nke superphosphate na ala. Mgbe ahụ, a na-ekpuchi nri na ala ala. Okpukpo ya kwesiri ibu na nkpoda nke osisi adighi aka na nri.
Izu abụọ ka e mesịrị, ị nwere ike akụ mulberry. Mgbọrọgwụ ya kwesịrị ịgbatị na prikopat, n'ikwe mmiri. Nke a dị mkpa iji wepụ ihe ndị na-asọpụrụ n'ala. Mgbe mgbọrọgwụ ya na olulu jupụtara kpamkpam, ala a ga-etinyere, na seedling kwesịrị mmiri na lita 20 mmiri. Mgbe mmiri ahụ zuru ezu, ọ dị mkpa ka ị gbanye osisi ahụ.
Ọ dị mkpa! Ọ bụrụ na etoghị osisi ahụ, tupu ị kụrụ ya dị mkpa ịkwado nkwado na ala olulu. Ọ ga-abụ onye njide maka sapling. A ghaghị agbanye osisi ahụ. Ọ bụrụ na a họrọ ala ụrọ maka ịkụ otu mulberry, mgbe ahụ, ọ dị mkpa ịkpụ brik ndị a na-agbajiri maka ịkwọ ụgbọ mmiri na ala ala.
Dịka e kwuru n'elu, a na-emepụta mulberries ugboro abụọ n'afọ: na mmiri na ụbịa. Ịdị na oge ndị a dị ka ihe yiri ya. Ma na-emekarị n'oge mgbụsị akwụkwọ, ha na-egwu olulu mmiri maka ịkụ ihe, dina nri n'ime ya ma laa ruo mgbe mmiri. Ma n'April, mezue ọdịda.
Mgbe a kụrụ osisi ahụ, ịkwesịrị ịma otú ị ga - esi nọgide na - elekọta mulberry. Ihe kachasị mkpa bụ ịmepụta osisi dị ukwuu n'oge oge mmepe, karịsịa ma ọ bụrụ na buds na-agbapụ. Ọ dịkwa mkpa ịzụ osisi ahụ.
Dịka osisi ọ bụla ọzọ, mulberry chọrọ kwachaa. Nke a kachasị mma n'oge udo. Osisi mulberry kachasị njọ na-eme na mmiri. Site na njedebe nke April ruo ná mmalite nke May, mgbe buds na-etobeghị, a na-eme ụdị nkụzi abụọ: formative na rejuvenating. A na - eme nke ọma na nke atọ - na - adịchaa n'oge mgbụsị akwụkwọ, mgbe niile epupụta dara. Ma ikuku ikuku ekwesịghị ịdị n'okpuru -10 Celsius. A ghaghị ịkpụcha ụdị mulberry dị iche. Na mulberry na-akwa ákwá, dị ka a na-achị, a na-agba okpueze ahụ, a na-ebelata alaka na alaka ya.
Ọ dị mkpa! Echegbula onwe gị ma ọ bụrụ na trimming dị ike. Ụdị mulberry a na-alaghachi ngwa ngwa.
Na shtambovannoy mulberry na-etolite okpueze. Ogologo ogologo, ogwe na-enweghị isi na-ahapụ, na n'elu bụ nnukwu okpu ma ọ bụ nsị alaka. Ihe kacha sie ike ịmepụta osisi mulberry. A na-ekpochapụ ogwe osisi na-eto eto site na alaka ruo na mita 1.5 site n'ala. Ị nwere ike inye okpueze ahụ ka ọ na-eto eto. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmalite osisi dwarf, belata oge ịgba oge apical dị elu nke dị ka 1.5 m ma ghọọ ọkpọ nke alaka iri. Mgbe ahụ ọ ga-adị gị mkpa ijide ọdịdị nke okpueze ahụ, belata mkpụrụ osisi ndị na-adịghị mkpa. Mkpịsị aka na-adịghị mkpa mkpa imetụ aka, ha na-ezube iji hazie.
Mgbe oge na-abịa iji dozie mulberry maka oyi, a na-arụchachaa ọcha. N'oge usoro a, a na-ebipụ alaka niile, ndị nwụrụ anwụ na ndị na-adịghị ike na Ome. A naghị ejikarị anụcha ọcha kwa afọ.
Ka mulberry wee merụọ ahụ ma ghara ịṅụbiga ya ókè site na pests, osisi ahụ na-ejikọta ya na ndị na-egbu egbu na ụmụ ahụhụ iji gbochie ya. Ọ ka mma ime nke a na mmalite nke Eprel, ebe a na-akpọtebeghị buds, na October, na njedebe nke oge vegetative. A ọma ọgwụgwọ nke ọrịa na pests bụ Nitrafen.
Na oge opupu ihe ubi, ọ ka mma ịhazi osisi ma tinye pasent asaa urea na ala. Ọ ga-ebibi ihe niile na-arịa ọrịa na ahụhụ ụmụ ahụhụ na-ada n'ala na n'ime ogbugbo mulberry. Ọzọkwa, a ga-etinye mmanụ ahụ na nitrogen fatịlaịza, nke dị mkpa mulberry n'oge a.
Iji mee ka mulberry gbanwee na mmiri frosts siri ike, ọ dị mkpa ka a ṅụọ mmiri site na mmiri ruo etiti oge okpomọkụ, ọ bụ naanị mgbe ihu igwe dị. Mgbe atọ kwesịrị ịkwụsị. Ọ bụrụ na mmiri bara ọgaranya, ọ dịghị mkpa. N'otu oge ahụ, ọ dị mkpa ka e nye nri mulberry ahụ. Na mmalite oge opupu ihe ubi, a ghaghị itinye nri ndị na-emepụta nitrogen na ala, na n'oge okpomọkụ - na potash na phosphate.
A na-akwado mulberry maka oyi na etiti mgbụsị akwụkwọ, na-agba alaka ya n'ala. Usoro a agaghị eme ka ihe isi ike, ebe ọ bụ na mulberry na-eto eto dị nnọọ ngbanwe. Ma ebe ọ bụ na mulberry na-etolite buru ibu, ọ ka mma idobe alaka skeletal n'ọdịnihu, ma kpọọ naanị alaka ndị na-eto eto.
Afọ atọ gara aga, ọ bụ ihe na-achọsi ike iji kechie ogwe osisi ahụ na isi alaka ndị na-ekpuchi ihe dị iche iche. Ọ dabeere na oke oyi frosts. Mgbe ahụ, ị ​​ga-atụba ya n'elu ihe ndị ahụ, gbasaa nsí n'okpuru ya maka òké oyi, nke nwere ike imerụ osisi ahụ nke ukwuu. Iji gbochie ikuku site na ịkwada akwa ákwà ahụ, ịkwesịrị ịkwatu ya na ihe dị arọ, dịka ọmụmaatụ, na pipụ, mbadamba ma ọ bụ brik. Ọ dị mkpa iji wepụ ebe obibi si mulberry na May mgbe oge mmiri nke mmiri na-abịa na njedebe.
Ọ bụrụ na i chebaghị banyere ikiri nke alaka ndị na-eto eto na nhịahụ nwere mkpuchi nchedo, mgbe ahụ, nlekọta nke osisi mulberry na nkwadebe maka oyi na-eme adịghị iche na agrotechnics nke apụl.
Ị ma? E nwere otu akụkọ mara mma banyere mmalite nke imepụta silk jikọtara ya na osisi mulberry. Princess Si Ling Ya nọ na-ezu ike n'okpuru nnukwu osisi silk mgbe obere aki dabara n'ime iko tii ya. Na ihe ọṅụṅụ na-ekpo ọkụ, ọ na-agbapụ ihe na-egbu maramara na mods. Ya mere, China achọtala otu n'ime ihe nzuzo ndị dị na nzuzo: obere caterpillar na-enweghị atụ nke na-ebi ndụ na mulberry bụ isi iyi nke ihe bara uru nke ọ ga-ekwe omume iji mee ihe dị ezigbo mkpa.
Mulberry na-enye mkpụrụ mbụ ya n'afọ nke atọ. Naanị tomato dị obere. Ha na-ebuwanye ibu mgbe afọ ise ruo isii gasịrị. Mana enwere ike imezi usoro a. N'oge opupu ihe ubi, ị ga-akụ mkpụrụ osisi akpa nwa. Ubi ahihia bu ihe kachasi nma, n'ihi na igaghi eto ugwu. Mgbe tomato chara n'onwe, ha daa. Na ala, n'okpuru osisi, naanị ị ga-etinye akwa ákwà, dịka ọmụmaatụ, spunbond. Mulberries dị nnọọ kemmiri ihe na ụtọ, ha nwere ike iru 5 cm n'ogologo. Ihe niile na-adabere na iche iche.
Osisi mulberry na-amụba ma mkpụrụ ma vegetatively.
Otutu nke osisi mulberry bu uzo kachasi nma maka osisi nile a. Naanị ị ga-ewere obere mkpuru tomato nke ụdị dị iche iche, tinye n'ime akpa ma tinye ya ka ọ gbagharịa. Mgbe ahụ, n'ime mmiri ị ga-achọ ịgha mkpụrụ ma kpochapụ mmiri na shells efu. Mgbe ahụ, jupụta na mmiri wee gafere onye na-edozi ya. Mgbe ahụ ehichapụkwa ọzọ na itucha. Tinyegharịa ruo mgbe mkpụrụ osisi dị ọcha ga-anọgide na-enweghị pulp.
Mgbe a ghachara ha nke ọma ma tinye ya n'akpa akwụkwọ ma debe ya n'ebe akọrọ ruo mmalite oge opupu ihe ubi. Ụbọchị iri anọ tupu agha agha, a ghaghị itinye mkpụrụ osisi dị ọcha n'okpuru shelf n'okpuru friza maka stratification ma ọ bụ debe mmiri ruo ụbọchị atọ. Ọ dị mkpa ka mkpụrụ mkpụrụ osisi mulberry dị omimi nke 1 cm n'ime ebe kachasị ọkụ. Ọ na-adịkarị mkpa iji mmiri mee ihe ga-eme n'ọdịnihu, ma ọ bụghị idebe ya.
I kwesịkwara ijide n'aka na osisi ndị na-eto eto adịghị emebi mmiri mmiri mmiri. A ghaghị ichebe osisi mbụ site na ikpughe ya kpọmkwem na ụzarị ọkụ UV. A ghaghị itinye ihe ọkụkụ dị ukwuu na oge nke akwukwo nke ise. A na-ahapụ ndị ọjọọ n'ime ala ka ha too ruo mgbe ha dị afọ abụọ. A naghị ebute ihe ịrịba ama nke osisi nne n'oge mmeputakwa site na mkpụrụ. A na-eji osisi ndị dị otú ahụ eme ihe maka grafting varietal mulberry.
Ị ma? Ụdị akwụkwọ dị na China nyekwara aka na mulberry. Ọ bụ ya bast, nke dị n'okpuru ogbugbo, e ji kee akwụkwọ.
Kedu ihe ọzọ bụ ụdị mulberry? Usoro kachasị mma nke ịzụlite n'oge okpomọkụ bụ ịcha. Ná mmalite oge ọkọchị, a na-ebipụ mkpịsị osisi abụọ ma ọ bụ atọ site na ịse nke ọma n'afọ a. A ghaghị iwepụ akwụkwọ ndị dị ala, na ndị fọdụrụ, hapụ ọkara nke efere ahụ ka ọnwụ ahụ wee na-eto ma na-etolite.
Ịkwesịrị ịkụ mkpụrụ osisi na griin haus, ị nwere ike ọbụna mee ka ọ dị mma, n'okpuru ihe nkiri translucent na omimi nke 3 cm. E nwere ọnọdụ ndị na-eme ka mkpụrụ osisi gbanye mgbọrọgwụ. Ha ga-achọ mmiri na-agafe agafe, ikuku ikuku mgbe nile nke ụlọ na fertilizing na ịnweta nri ịnweta. Eziokwu ahụ bụ na enwere ike ịgbanye mkpọrọgwụ na otu ọnwa, mgbe Ome ọhụrụ pụtara. Mkpụrụ ndị a bụ kpọmkwem nne osisi.
A nyadochari Mulberry site na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụzọ niile a maara. Nke kachasị mfe na, nke kachasị mkpa, ọ bụ ihe nchịkwa ka ị na-eme. Enwere ike kụrụ mulberry n'ime ụlọ n'oge oyi ma ọ bụ mmalite nke mmalite oge opupu ihe ubi. Ihe ndị ahụ a na-anyadokwa tupu ha ejiri ya mee ihe na-agba ọsọ ngwa ngwa.
Akpụkpọ ụkwụ dị mfe na-anọchite anya otu ihe ahụ na-atụgharị na mkpịsị aka na mgbọrọgwụ nke mere ka ikpuchi ndị na-ekpuchi ya dịkwuo ọnụ. A na-emechi ihe dị n'etiti akụrụ. Mgbe a na-ejikọta ihe ndị ahụ, ọ ga-ejide eriri ahụ na-acha odo odo.
Ọ dị mkpa! Ekwela ka iwepụ. N'okwu a, enwere ike ịmalite ịbịaru ya.
Idozi di nma na ire di iche na ntinye ngwa ngwa nke ozo yiri syifs, nke mgbe ha na ndi ozo jikotara. Nke a na-enye ezigbo ihe njikọ nke dị n'etiti anụ ahụ. Ọ dị mkpa ịlaghachite otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ogologo oge nsị site na njedebe nke ịkpụ nke ngwaahịa ahụ. Na aka, a na-eme mbepụ ahụ elu ma na-eme ya ruo ọkara oblique ịkpụ. N'ihi ya, a na-etu "asụsụ" dị iche iche na mkpịsị abụọ ahụ, nke ha na-enye aka nke ha na-ejikọta ibe ha.
Dị ka otvodka ji ala ala ala. Ọ na-ehuda ala ma debe n'elu ala, wee fesa ụwa. Iji mee ka ọ dịkwuo mma, alaka ụlọ ọrụ ahụ ga-agbajikwa n'ogige atụrụ ahụ ma ọ bụ mgbapụ nke ogbugbo. Site na usoro a, a kpalitere mgbọrọgwụ. A ghaghị ime usoro ahụ n'oge opupu ihe ubi, site na mgbọrọgwụ ọdịda ga-apụta na n'ígwé.
Ị ma? Ọkachasị kasị ochie na Ukraine bụ nke na-etolite n'ókèala nke National Botanical Garden na-akpọ Grishko. Ọ dị afọ 500. Dị ka akụkọ si kwuo, ndị mọnk pilgrim kụrụ ya site na mkpụrụ ndị e si n'Ebe Etiti Eshia weta. Ha na-eche na ọ bụ osisi a ka a na-ewere nne nke osisi mulberry Ukraine dum. Kobzar n'onwe ya mere ọtụtụ esere osisi a.
Cheta na ị na-akụ ọtụtụ osisi mulberry, ị ga-enye ọgbọ dum nke tomato. E kwuwerị, mulberry, dabere n'ụdị dị iche iche, nwere ike ịdị ndụ ruo ọtụtụ narị afọ.
Mara mma ma na-adigide ngwakọ ọtụtụ tomato "Oké boatswain" - nkọwa na kwe nkwa na-eto eto
Oké osimiri buckthorn na-eto eto: ụzọ dị iche iche nke ịkụ na ihe ọkụkụ
Uche na-acha ọcha Orange na spraled cob - Anthurium Scherzer
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Ịgbara, kwachaa na ịzụlite mulberries